ွGmail မှ အလွယ်ကူဆုံးပုံတင်ကြီးကြီးတင်နည်း။ | MTS Online Radio
← လူတိုင်းမသိမဖြစ်သိသင့်တဲ့ ကွန်ပြူတာအကြောင်းများ။
Window7အကြောင်းသိကောင်းစရာများ။ →
Gmail ကနေပုံတွေကို attach file နဲ့မတွဲပဲ view
(မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်တာနက်ကွန်နရှင်မကောင်းသူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။)
သူငယ်ချင်းတို့ gmail ကနေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဓါတ်ပုံပို့ကြတဲ့အခါမှာ attach file နဲ့ တွဲပို့တဲ့အခါဆိုရင် view နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစောင့်ရဦးမယ် Desktop ပေါ်မှာ တင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒေါင်းရဦးမယ် မလားဗျာ….အဲ့လို့ဒေါင်းဖို့ က မြန်မာနိုင်ငံက ကော်မျိုးဆိုရင်တော့ တေပီဆာပဲ …. အဲ့ဒီ အခက်အခဲတွေကိုကျော်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော် Gmail ကနေပုံတွေကို attach file နဲ့မတွဲပဲ view ကျယ်ကျယ်နဲ့တစ်ခါတည်းပို့ရတဲ့နည်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ….။
လုပ်နည်းကတော့မခက်ပါဘူး …..အရင်ဦးဆုံး သူငယ်ချင်းတို့ Gmail အကောင့်ကို signin ဝင်လိုက်ပါ ပီးရင် မေးလ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာအပေါ်ထောင့်လေးမှာရှိတဲ့ setting ထဲကိုသွားလိုက်ပါ ကျွန်တော် အောက်က ပုံ(၁-၁) နဲ့ပြထားပေးပါတယ် ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျား….။
ပုံ(၁-၁) မှာပြထားသလို့ setting ကိုဝင်လိုက်ရင် စာမျက်နှာတစ်ခုထပ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် …သူငယ်ချင်းတို့ပိုရှင်းအောင် ပုံနဲ့တစ်ခါတည်းတွဲပီး ပြထားပေးပါတယ် အောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။
အဲ့ပေါ်လာတဲ့ စာမျက်နှာပေါ်က ကျွန်တော် အနီးနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ labs ထဲကို ထပ်ဝင်လိုက်ပါ အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင် labs တွေအများကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ labsအများကြီးထဲက inserting image ဆိုတဲ့ labs ကိုရှာပီး enable ကိုကလစ်ပေးပီး အောက်ဆုံးက save changes ဆိုတာလေးကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆို view ကျယ်ကျယ်နဲ့စာပို့လို့ရပါပီး …. ပုံလေးကိုကြည့်ပါခင်ဗျား မရှင်းမှာဆိုးလို့ ကျွန်တော်ပုံနဲ့ ထပ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
ဒါဆို labs နဲ့လုပ်တဲ့နည်းလေးပေးသွားပါပီး ပုံကိုဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာထပ်ပြောပြပါ့မယ်ခင်ဗျား….။
ဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာပါ တစ်ခါတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား ကျွန်တ်ေဘော်ဒါကြီးကိုမင်းခပြောသလို ပို့မဲ့ပို့ ကူတို့ရောက်အောင်ပို့ဆိုတဲ့ စကားကိုကျွန်တော်အမြဲ တမ်း အမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ပါ …ဟဲဟဲ ။
ကဲဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာကိုအောက်မှာဆက်ကြည့်ပါခင်ဗျား …. သူငယ်ချင်းတို့ အရင်ပို့နေကျအတိုင်း compose mail ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ အဲ့ထဲက အရင်ကသူငယ်ချင်းတို့ပို့နေကျ အတိုင်း« Plain Text တစ်ခုထပ်ပိုလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ ..။
အဲ့ဒီ « Plain Text ထဲက insert text ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ အဲ့အခါကျရင် nwe page တစ်ခုထပ်ပေါ်လာပါတယ် အဲ့ပေါ်လာတဲ့ nwe page ထဲက browse ထဲကနေ ပုံကို upload တင်လိုက်ပါ ပီးရင်အိုကေလိုက် …. မရှင်းဘူးဆိုရင်အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ..
ဒါဆိုပုံက တစ်ခါတည်း ပုံကိုစာနဲ့အတူတွဲပို့ပီး view ကြီးကြီးနဲ့ကြည့်လို့ရ ပို့လို့ရပါပီး ….
သူငယ်ချင်းတို့ ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်တဲ့အနည်းအတိုင်းစမ်းကြည့်လိုက်ကြပေ့ါဗျား ဒါဆို ကော်မကောင်းပဲ ဓါတ်ပုံ ပို့ရ တဲ့အန္တာရာယ်ကနေ ကင်းသွားပီးပေ့ါဗျား …
Posted by မိုးစက်(အညာတရ) on မေ 30, 2011 at 12:00am
သတင်းပို့မယ် View မိုးစက်(အညာတရ)’s blog
မိတ်ဆွေများအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ကျနော်ဖတ်ဖူးတဲ့ဘလော့မှ ဝေဌပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။